MW Farmaajo oo sharaxaad ka bixiyay xaaladda & Go’aankiisa doorashada 2021 -News and information about Somalia
Home Warkii MW Farmaajo oo sharaxaad ka bixiyay xaaladda & Go’aankiisa doorashada 2021
MW Farmaajo oo sharaxaad ka bixiyay xaaladda & Go’aankiisa doorashada 2021
Madaxweynaha DFS Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa ka hadlay Xaaladda Dalka, Faragelinta Dowladaha Shisheeye, Doorashada iyo Xisbiga Dowladda ku matalayo iyo hiigsiga Dowladda.
Madaxweyne Farmaajo ayaa arrimahaan lagu Weydiiyay Wareysi uu siiyay TV-ga Universal, waxaana ugu horeyn uu ka hadlay Xaaladda Siyaasadeed ee dalka iyo qorshaha Dowladiisa 3-sano kadib.
Waxa uu tilmaamay in Ciidamada Dowladda ay wadaan howlgalo lagu sugayo ammaanka, isaga oo ku bogaadiyay in ay sii laba-laabaan sugidda amniga.
Madaxweynaha waxa uu soo hadal qaaday Doorashada Dalka 2020/21-ka, Xisbiga Dowladda ku matalaya waxa uu shaaciyay in ay ku mideysan yihiin Madaxda Dowladda gaar ahaan Madaxweynaha iyo Ra’iisul Wasaaraha.
Waxa uu sheegay in ay ku faraxsan yihiin Madaxda Dowladda in Dalka ay ka dhacdo Doorasho Dadweyne, si shacabka ay u doortaan Xisbiga Talada Soomaaliya qabanaya sanadaha Soo socda marka doorashada ay dhacdo kadib.
Madaxweynaha DFS Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu Sugidda Amniga Caasimadda ku tilmaamay in mid ay la falgalayaan Hay’adaha kala duwan ee Amniga u qaabilsan Dowladda Soomaaliya.
Waxa uu tilmaamay in Dowladda ay kahor tagtay weerarada tooska ah ee Al-Shabaab, balse qaraxyada ay ka dhex abaabulaan shacabka oo waxyeelada ugu badan gaarsiiya sida uu hadalka u dhigay.
“Waxa aan ku guuleysanay in aanu yareyn Qaraxyada, marka lala barbar dhigo Dowladdii naga horeysay oo isbuuc-isbuuc u dhacayeen Qaraxyada inkasto oo ay dhacaan, uma badna sidii hore, taasi waxa aan ku gaarnay Tayada Ciidamada oo aan kor u qaadnay iyo mushaarkooda oo aan joogto ka dhignay” ayuu yiri Madaxweyne Farmaajo.
Madaxweynaha Dowladda Federaalka Soomaaliya waxa uu sheegay in Dowladaha qaar ay faragelin ku hayaan madax banaanida dalka, Dowladda ayuu tilmaamay in ay mas’uul ka tahay xaaladda guud.
Kenya ayuu shaaciyay in aysan waxba ka gelin faragelin ay ku sameyso Dowlad Goboleedka Jubbaland, waxa uu sheegay in Dowladaha Soomaaliya iyo Kenya uu u furan yahay kiis dacweedka badda, meel walibana ay usoo mareysi sidii ay u hor istaagi lahayd dacwaddaas.
“Ma aqbaleyno in Kenya ay faragelin gudaha ah sameyso, mana dooneyso in Jubbaland ay u ekaato aalad loo isticmaalayo in Dowladda Federaalka loo adeegsado, Dowlad Goboleedyada ma ahan in loo isticmaalo dhibaatada Dalka, Anigu ma faragelino Dowladaha deriska” ayuu yiri Madaxweyne Farmaajo.
Previous articleMacalin Maxamuud: “ma aqbali karno falal amni daro ee ka dhaca Dhuusamareeb”
Next articleKoox hubeysan oo maanta Sarkaal ku dilay gobolka Banaadir
Wasiir Beyle Oo Kulan La Qaatay Safiirka Turkiga Ee Somalia
Madaxweynaha K/Galbeed Oo Xilalkii Ka Qaaday Wasiiro Ka Tirsan Maamulkiisa
Wararkii Ugu Dambeeyay Dil Ka Dhacay Magaalada Dhuusamareeb
Farxada Uu Helay MD Farmaajo Ee Sababta U noqon karta inuu...
Ammaanka Magaalada Dhuusa Mareeb Oo La Adkeeyay Iyo Shirka Dib U...